आज नयाँ वर्ष ! हेर्नुहोस् तपाईंको नयाँवर्ष सुरुवातको राशिफल
April 13, 2020 2045
मेष : मेहनेतले चाहेको उप’लब्धि हासिल हुँनेछ । परिवार”का साथ लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा’को प्रवल सम्भावना रहेकोछ । खोज तथा अनुशन्धानमा समय ल’गानि गर्नेहरुले राम्रो नति’जा हात पार्न सक्ने योग रहेकोछ ।
पढाई लेखाईमा अरु’दिन भन्दा सुधार भएर जानेछ । कुनै पनि क्षेत्रमा आउने प्रतिष्पर्धि’हरुलाई सजिलै हराउन सकि’नेछ । माया प्रेम’मा एक अकासँग नजिक हुने समय रहेकोछ ।
संकट ब्याबस्थापनका लागी चा’लिएका प्रया’समा बाधा हुनेछ भने फसाउनेहरु हाबि हुनेछन् । हतार हतारमा काम गर्दा बिग्रन सक्छ होस पु¥याउनु होला । समस्या तथा चुनौतिह’रुको सामना गर्नुपर्दा मानशिक तनाब बढ्नेछ ।
भौतिक सामा’ग्रीको प्रयोग गर्दा वा स’वारि साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घट्ना घट्न सक्छ । साथिभाईह’रुले नै असहयोग गर्नेछन् भने अरुको स्वार्थको लागि प्रयोग होईनेछ ।
थोरै स्रोत साधन’को प्रयोगबाट असिमित आवस्य’क्ताहरु पुरा गर्न सकिने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । उत्पा’दन क्षेत्रमा गरिएको लागानि’बाट आउने आम्दानिले भबि’श्यको लागि भौ’तिक सम्पति तथा सवारि साधन जोड्न सकिनेछ ।
बिबाह,बनभोज तथा यस्तै समा’रोहमा साथि’हरुसँग सहभागि भई मिठा परिकार खादै रमाई’लो गफ गरेर दिन कटाउन सकिनेछ । साझपख कुनै काम गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।
आम्दानि भन्दा खर्च कम हुँने हुँदा आर्थिक क्षेत्र ब’लियो हुनेछ । पुराना स’मस्या आफै हल भएर जा’नेछ भने ऋण रोग’बाट छुटकरा पाईनेछ । पढाई लेखाईमा भनेजस्तो न’तिजा हात लाग्ने हुँदा आफन्त तथा गुरुवर्गहरु खुसि राख्न सकिनेछ ।
माया प्रेमका कोपिलाहरु फक्रि’यर जानेछन् भने नयाँ ठाउँबाट प्रेम प्रस्ताव आउँनेछ । आफन्त तथा मावलि पक्षबाट स’हयोग पाईने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
पढाई लेखाईमा फितलो उपस्थि’तिले गर्दा अरु भन्दा पछि परिने सम्भावना रहेको छ । सन्तान तथा छोरा’छोरिले तपाईको काममा आंशिक सहयोग गर्नेछन् ।
बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो क्षम’ता प्रदशन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने सोचेजस्तो पारिश्रमिक नपाउँदा मन खि’न्न हुनेछ । प्रेम प्रसङगमा एक अर्का’बिच भावना सा’टासाट गरि समय ब्यातित गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य सम्ब’न्धि समस्या आउँने हुँदा दैनिक काम’काज गर्न गाह्रो महशुष हुनेछ ।
बिभिन्न अवसरहरु आएप_नि ति अवसरहरुको सहि रुपमा सदुपयो’ग गर्न नजान्दा समयले पछि छोड्नेछ । व्यापार व्यावसा’यमा प्रशस्त समय खर्चदा मात्र आम्दानि गर्न सकिनेछ भने घर जग्गा तथा सवा’रि साधनको खरिद बिक्रि’बाट मनग्गे लाभ लि’न सकिनेछ ।
महत्वपुण काम गर्दा ध्यान दिनु’होला आफन्त तथा ईष्टमित्रह’रुले बाधा तथा व्यबधान पु’र्याउनेछन् । समयको पावबन्धिलाई ख्याल नगर्दा दुख पाईनेछ भने समयमा काम नबन्दा आर्थिक स्थिति खस्क’नेछ ।
न्यायलयबाट हुँने न्यायिक निर्ण’यहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । बादबिवाद,प्रतिश्प’र्धा तथा मुद्दा मामिलामा तपाई’कै जित निश्चित छ । जनसम्पर्क बढ्ने तथा दाजुभाई,छिमेकिबाट भनेज’स्तो सहयोग पाईने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
आफुभन्दा बिशिष्ट ब्या’क्तिसँगको भेटघाटले नयाँ योज’ना बनाउँन सहयोग पुग्नेछ । साझबाट समय मध्ययम रहेकोले आफन्तसँग घराय’सी कुरामा राय बाजिनेछ ।
पारिवारिक माहोलमा जम’घट भई रमाईलो गर्दै मि’ष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । व्यापारमा बृद्धि हुने तथा मनग्गे नाँफा कमाउँन सकिनेछ ।
आर्थिक अवस्था सु’दृड हुने हुनाले दै’निक सहज मात्रामा अगाडि बढ्नेछ । माया प्रेममा नजिक हुन सकिने तथा मिल्ने मित्र’को साथ पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । बोलेर गर्ने कुनै पनि पेशा व्याव’साय फस्टाएर जानेछ ।
नयाँ प्रबिधिको प्रयोग मार्फ’त नया ज्ञान सिक्ने समय रहेकोछ । बिभिन्न अवसर प्राप्त हुने हुनाले जोस जागर बढेर आउनेछ । पढाई लेखाईमा अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिनेछ ।
भौ’तिक सम्पति तथा सवारि साधन प्रा’प्तीको गतिलो योग रहेकोछ । माया प्रेममा नजिक भई भावना साटासाट गर्ने अव’सर जुर्नेछ । समाजिक सञ्जाल तथा मिडिया मार्फत आफ्ना बिचारहरु अरु सामु लैजान सकिनेछ ।
लामो दुरिको बिदेश यात्रा हुनेछ भने बिदेशमा बसेर अध्ययन तथा काम गर्नेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ । स्वदेशमा उत्पादीत सामानको व्यापारमा केहि मन्दि आउने भएपनि बिदेशमा उत्पादित सामानको व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
अध्ययन तथा अध्यापनमा ध्यान नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले माया प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ ।
कार्य क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव ज’माउन सकिने हुदा मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । भुमि,बाहन तथा भौतिक बस्तुका प्र’योग मार्फत मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्ध सुदृड हुनेछ ।
अध्यनमा प्रगति हुँने हुँदा बिद्यार्थि वर्गका लागि आ’जको दिन फलदायि रहनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ ।
नयाँ काम आरम्भ गरि मनग्गे रुपैया पैसा कमाउँन सकिनेछ । व्यापार व्या’वसाय फस्टा’एरु जाने तथा आ’र्थिक स्थिति मजभुत भएर जानेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन पाईने हुँदा मान सम्मानको साथ पद प्रात्तिको योग रहेकोछ ।
बिगतमा सुरु गरिएका कामबाट भनेजस्तो आम्दानि हुनेछ भने पैत्रिक धनको प्रयोग मार्फत मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ ।
Prevआज वि.स. २०७७ को पहिलो दिन। यसरी सुरुभयो विक्रम संवत, पढ्नुहोस्
Nextमनकारी नायिका पूजा शर्माले घर-घरमै पुगेर बाँडिन् राहत , हेर्नुहोस्
उद्योगमन्त्री भट्टलाई ‘जहाँ भेट्यो त्यहीँ टाउको का’ट्ने धम्की’
हृद’यघातको हल्लापछि लाइभमा आएर पारस शाहले भने: के हर्ट’अट्याक हुने मान्छे हो म ?भएपनि फेरि उठ्छु (भिडियोसहित)
आज पनि बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशको कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्
सुनको मूल्य घट्यो, आज तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ? हेर्नु’होस्
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (114974)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (111131)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (92690)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (91588)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81142)
यी जोडीको टिकटकमा अनौठो हर्कत, एकाएक भाइरल बन्यो भिडियो (भिडियो सहित) (74091)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (73389)